MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardfaqs mpt product mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
၁။ MPT4U App ဆိုတာဘာလဲ။ မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု များ ရယူနိုင်သလဲ။
MPT အသုံးပြုသူတို့အတွက် ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံတို့ကို တစ်နေရာထဲမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ MPT4U app ကို မြန်မာဘာသာဖြင့်အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါသည်။
– နေ့စဉ်အသုံးပြုသည့် ဖုန်းဘေလ်နှင့်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှု၏ဝန်ဆောင်ခများစစ်ဆေးခြင်း ၊
– ပက်ကေ့ချ် လက်ကျန် ပမာဏများ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊
– ရယူထားသော ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊
– Call Service ဝန်ဆောင်မှု့များ ရယူနိုင်ခြင်း၊
– တူတူChat ဝန်ဆောင်မှု့များ ရယူနိုင်ခြင်း၊
– FAQ များ ဖတ်ရှု့နိုင်ခြင်း၊
– MPT Ring Tune ရယူခြင်း၊
– MPT Club ပွိုင့်များ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊
– လိုတရ ပက်ကေ့ချ် သို့ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း၊
– ရှယ်ပြော၊ ရွှေစကား အစရှိသော ဝန်ဆောင်မှု များပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊
– MPT4U ဂိမ်း ဝန်ဆောင်မှု အစရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၂။MPT4U App ကိုဘယ်လို Download ရယူရမလဲ။
၃။ MPT4U App ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ။
၄။MPT4U ကို အင်တာနက်မလိုဘဲ MPT4U web နှင့် မိုဘိုင်း(Android/IOS)တွင်အသုံးပြုနိုင်သလား။
– ဟုတ်ကဲ့ Android ဖုန်းတွင် အင်တာနက်မရပဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါနည်းအတိုင်းပြုလုပ်ပါ.
i. MPT network ကို အသုံးပြုပါ
iii. VPN ကိုပိတ်ပါ
iv. ပြီးနောက် MPT4U အက်ပလီးကေးရှင်းကိုအသုံးပြူနိုင်ပါတယ်။
– မကြာမီ IOS ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
– အင်တာနက်မရှိပဲ MPT4U web ကိုအသုံးပြုလို့ မရပါ။
၅။ MPT4U ကိုအသုံးပြုရန်VPN လိုအပ်ပါသလား။ အင်တာနက်မလိုဘဲMPT4U ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ဝန်ဆောင်ခပေးရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးသုံးနိုင်မည်လား။
– MPT4U APP ကို VPN ချိတ်ဆက်ထားပြီး အသုံးပြုလို့ရသလို မချိတ်ဆက်ထားရင်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။VPN ချိတ်ပြီးအသုံးပြုပါက OTP တောင်းပြီးနောက် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
– MPT4U ကို MPT ကွန်ရက်တွင်အသုံးပြုပါက အမြဲတမ်းအခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
– ယခုအချိန် အင်တာနက်မလိုဘဲသုံးနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ
iii. ငွေဖြည့်ကဒ်အသုံးပြု၍ ငွေဖြည့်နိုင်ခြင်း
v. အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ ဝယ်ယူခြင်း
viii. MPT Club ပွိုင့် စစ်ဆေး အသုံးပြုခြင်း
x. ငွေဖြည့်မှတ်တမ်း နှင့် ပက်ခ်ျေ့ဝယ်ယူခြင်းမှတ်တမ်း စစ်ဆေးခြင်း
xi. ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် အစီအစဉ်ပြောင်းခြင်း တို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
– ထို့အပြင် အင်တာနက်မလိုဘဲMPT4U ထိပေါက်ဆော့လို့ရပါသည်။ သို့သော် တခါတရံ တုံပြန်မှုနှေးနိုင်ပါတယ်။
၆။ အင်တာနက်မလိုဘဲMPT4U ကိုအသုံးပြုရာတွင် ဘယ်ဝန်ဆောင်မှုများ မရနိုင်မည်နည်း။
i. ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော မဟာ၊Viu၊ Mobile Legends ၊ MPT recommended video၊ MNL, MPT Ballone တို့သုံး၍မရပါ။
ii. သတင်းအချက်အလက်နှင့်တခြားဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော လိုတရ၊ တရားတော်များ၊ ဗေဒင် ၊ ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့် ဉာဏ်စမ်းဝန်ဆာင်မှူတို့မရပါ။
iii. တခြားMPT၏လူမှုကွန်ရက်များ Viber, Line, Facebook တို့ အသုံးပြု၍မရပါ။
၇။ MPT4U App ကိုအခြားဘယ် Network နဲ့ မဆိုသုံးလို့ရနေပြီလား။
၈။ MPT4U Appကိုဘယ်လိုUpgradeလုပ်နိုင်ပါသလဲ?
၉။ မိမိဖုန်းတွင် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း ဗားရှင်းကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မလဲ။ MPT4U Version အသစ်ကဘာလဲ။ Version အသစ်ကို အသုံးပြုရန် အနိမ့်ဆုံး Android နဲ့ iOS ဗားရှင်းကဘယ်လောက်ရှိရမှာလဲ။
– Side bar menu အောက်ရှိ Setting page မှာဗားရှင်းကို သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
– MPT4U Version အသစ် မှာ IOS : 1.4.9 နှင့် Andorid : 4.4.0 ဗားရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။
– Android ဗားရှင်း “ 6” ထက်နိမ့်ပြီး iOS ဗားရှင်း “ 10” ထက်နိမ့်လျှင် အသုံးပြုမရပါ။
၁၀။ သတ်မှတ်ထားသည့် version ထက်နိမ့်နေသော ဖုန်းများသည် MPT4U Versionအသစ်ကိုအသုံးပြုရန် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးတပ်ဆင်နိူင်ပါသလား။
သတ်မှတ်ထားသည့် version ထက်နိမ့်နေသော ဖုန်းများတွင် အက်ပလီကေးရှင်းကို ​ဒေါင်းလုတ် လုပ် နိူင်သော်လည်း တစ်ချို့လုပ်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ အလိုအလျောက် အက်ပလီကေးရှင်းထဲမှထွက်သွားလိမ့်မည်။
Side bar menu ထဲက -> Setting အောက်ရှိ Language ကိုရွေးပြီး ဘာသာစကားကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
၁၂။MPT4U မှ "WOW" ဆိုတာဘာလဲ။
MPT4U WOW သည် သုံးစွဲသူများအား ပရိုမိုးရှင်း၊ပွဲများ၊ သတင်းများကဲ့သို့ MPT ၏နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များ ကို သိရှိစေနိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။
MPT4U WOW ကို MPT4U Home Pageရဲ့ အောက်ခြေ မှာ သုံးစွဲသူတို့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၁၃။ Home screen မှာမြင်ရတဲ့ Privilege icon လေးသည် မည်သည့်အတွက်ထားရှိထားတာပါလဲ? Icon လေးတွေကိုလိုသလိုပြောင်းလို့ရပါသလား။
– Privilege icon သည် MPT Club နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိလိုပါက ၎င်း icon ကိုနှိပ်၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
– အပေါ်ဆုံးမှာတွေ့မြင်ရမည့် Default ထားထားသည့် icons ၄ ခုကိုတော့ ကိုယ်လိုချင်သလို ပြောင်းလို့မရပါ။
– အခြားသော Icon လေးတွေပြောင်းရွေ့ဖို့ရန်အတွက်Service ထဲမှာ edit ကို click လုပ်ပြီး Icon လေးတွေကို drag လုပ်၍ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
၁၄။ Account Details တွင်ဖော်ပြထားသော Balance, Daily Usage, Top Up History, Order History များကို မည်သည့်ရက်ပေါင်းအတွင်း စစ်ဆေးလို့ရနိူင်မလဲ။
Account Details တွင်
Balance ကို Real Time Balance အဖြစ် စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Daily usage ကို ရက် ၉၀ ထိနှင့် လက်ရှိ အချိန်ထိစစ်ဆေးနိုင်ပြီး
Top Up History နှင့် Package Purchase History
များကို (၆) လစာစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။မိမိဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်များ ဘေလ်လက်ကျန်များကို စစ်ဆေးလိုပါက MPT4U ဗားရှင်းအသစ်တွင် ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်မလဲ။
၁၆။ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို MPT4U တွင်လုပ်ဆောင်လို့ရပါသလား။မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုMPT4U တွင်လုပ်ဆောင်လို့ရပါသည်။
MPT4U မှ” ကျွန်ုပ် ” ကိုနှိပ်၍ “ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်” စာမျက်နှာတွင် သင်ရဲ့လိုအပ်သောအချက်လက်များကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းပြီး “ သိမ်းပါ” ကိုနှိပ်၍ ပြုလုပ်ရပါမည်။ ထိုအပြင် မိမိ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီ: မှန်ကန်မှုမရှိပါက ပြန်လည်ပြုပြင်ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ My Profile မှာပါတဲ့ % ကသုံးစွဲသူ၏မှတ်ပုံတင် သတင်းအချက်အလက်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၇။ MPT4U log in ဝင်မရခြင်း၊ မည်သည့်စာသားမှမပေါ်ပဲအဖြူရောင်ဖြစ်နေခြင်း၊အသုံးပြုနေစဉ် ရုတ်တရက်“ဝန်ဆောင်မှုအချိန်ကုန်ဆုံးပါပြီ"ဟုစာသားပေါ်လာခြင်း၊ Hti Pauk ဆော့၍မရ ခြင်းတို့ကြုံတွေ့ပါကမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
– ပထမဦးစွာ VPN တပ်ဆင်ထားခြင်းကိုဖြုတ်ပေးပါ။
– Log in ပြန်ဝင်ပေးပါ။
– ဖုန်း setting ထဲက ဒေတာကို Clear Cache လုပ် ပေးပါ။
– အဆင် ပြေခြင်းမရှိသေးပါက MPT4U နောက်ဆုံး Version ကို *4040# မှတဆင့် Download ရယူ၍ပြန်လည်အသုံးပြုပါ။
၁၈။ USSD ဖြင့်ပက်ကေ့ချ်များဝယ်ယူပြီးနောက် ရရှိသော ထိပေါက် chance များကို SMS မှတဆင့်ပေးပို့ပြီးသော်လည်း MPT4Uအက်ပလီကေးရှင်း ထဲတွင်ဘာကြောင့်မတွေ့ရှိရပါသလဲ။
၁၉။ ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့် ရှိပါသလား။
ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့် မရရှိပါ။
၂၀။ ထိပေါက်ကစားခွင့်များမှာ ကုန်ဆုံးချိန် ရှိပါသလား။ထိပေါက် ကစားပြီး ကံစမ်းမဲပေါက်ထားသည်များကို စစ်ဆေးလို့ရပါသလား။
ရှိပါသည်။ ကစားခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်အချိန်မှာ (23:59:59) ဖြစ်သည်။ထိပေါက် ကစားပြီး ကံစမ်းမဲပေါက်ထားသည်များကို main page ရှိ Lucky Draw ကို နှိပ်ပြီးထိပေါက် Historyတွင် (၇)ရက်ထိစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။
၂၁။ Package Purchase page တွင်ပေါ်နေသော Gift icon ဆိုတာဘာလဲ။ပက်ကေ့ချ်လက်ဆောင်ပေးသူ နဲ့ လက်ဆောင်ရရှိသူ အကြား ထိပေါက်ခံစားခွင့်ကို ဘယ်သူရမလဲ။
MPT သုံးစွဲသူ အချင်းချင်း လက်ဆောင်ပေးလို့ရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။ပက်ခ်ျေ့လက်ဆောင်ရရှိသူက ထိပေါက်ခံစားခွင့်ကိုရရှိပါမည်။
၂၂။MPT4U game ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။ မည်သို့ကစားရမလဲ။
၂၃။ MPT4U game ကို မည်သူတွေပါဝင်ကစားခွင့်ရှိပါသလဲ။
၂၄။ MPT4U game မှာ game ဘယ်လောက်ပါဝင်မှာလဲ။Game တွေကို ကစားရင် ဒေတာဖိုး ကုန်ကျပါမည်လား။
အနည်းဆုံး game ပေါင်း (၅) ခုပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။MPT4U game များကစားရာတွင် မည်သည့်ဒေတာဖိုးမျှပေးရန် မလိုပဲ အခမဲ့ဒေတာဖြင့် ကစားနိုင်ပါသည်။
၂၅။ Game တွေကို ကစားရင် မည်မျှပေး၍ ကစားရမလဲ။
Game ကစားသူများသည် Game များကို အောက်ပါအခြေအနေနှစ်မျိုးနှင့် ကစားနိုင်ပါသည်။
အခမဲ့ပွဲစဉ်များ – ကစားသူများအနေဖြင့် မည်သည့်အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပဲ အခမဲ့ကစားနိုင်ပါသည်။
ဝင်ကြေးပေးပွဲစဉ်များ – ကစားသူများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဝင်ကြေးပေး၍ ကစားနိုင်ပါသည်။
၂၆။ အခမဲ့ဂိမ်းတွေအတွက် ဆုလက်ဆောင်တွေပါမည်လား။
၂၇။ဂိမ်းကစားခြင်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။
၂၈။ဝင်ကြေးပေး၍ ကစားရသောဂိမ်းများအတွက် ဆုလက်ဆောင်ဟာ မည်သည့်အရာများဖြစ်သလဲ။ ဝင်ကြေး မည်မျှရှိမည်နည်း။
၂၉။ ဆုရရှိသူများသည် မည့်သည့်အချိန်တွင် လက်ဆောင်များရရှိပါမည်နည်း။ဆုရရှိသည့်အခါ စာတိုဖြင့် အကြောင်းကြားမည်လား။
ဆုရရှိသူများသည် ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးသည့် အချိန်မှစတင်၍ ၁၀ရက်အတွင်း လက်ဆောင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ရရှိသည့်ဆုအား ပေးအပ်သည့်အခါတွင် စာတိုဖြင့် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကစားသမားများသည် မိမိရရှိသည့် အဆင့်နှင့်ဆုလက်ဆောင်များကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေစဉ်သော်လည်းကောင်း၊ ပြီးဆုံးသွားသည့်သော်လည်းကောင်း ဂိမ်းစာမျက်နှာတွင် စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
၃၀ ။အကယ်၍ ဂိမ်းကစားသူသည် ယခုပြိုင်ပွဲများအပြင် ယခင်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ တယ်လီကွန်းဆုများ ဆွတ်ခူးထားပါက ဆုလက်ဆောင်များ၏ သက်တမ်းကို မည်ကဲ့သို့ဖြတ်တောက်သွားမည်နည်း။
တယ်လီကွန်းဆုလက်ဆောင်များ၏ သက်တမ်းသည် ရက်(၇)ဖြစ်ပါသည်။
တယ်လီကွန်းဆုလက်ဆောင်အား အစောပိုင်းရရှိသည့် ဆုလက်ဆောင်အား စတင်ဖြတ်တောက်ပြီး အဆိုပါဆုလက်ဆောင်ကုန်သွား၍သော်လည်းကောင်း သက်တမ်းကုန်သွား၍သော်လည်းကောင်း အခြေအနေမှသာ နောက်ဆုံးရရှိသည့် ဆုလက်ဆောင်အား ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။
၃၁ ။MPT4U App ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများတွင် ကစားသူများ နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာဖြင့် ကစားပြီး ဆုလက်ဆောင်များ ရရှိအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ထားပါသလဲ။
MPT4U App မှဂိမ်းဆော့ခြင်းမှ အမှတ်များရအောင်နှင့်အဆင့်ထိပ်ဆုံးများရအောင် ဂိမ်းဆော့ခြင်းမှမဟုတ်ပဲ အခြား Third Party Software များ၊ MPT4U ဂိမ်းပြင်ပ App များအသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။ အသုံးပြုကြောင်း တွေ့ရှိပါက ကစားသူ၏ ဖုန်းနံပါတ်အား Blacklist သွင်း၍ နောက်ပိုင်း ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိလာခဲ့သည့် ဆုလက်ဆောင်ကိုလည်း ပေးအပ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
၁။MPT Point အရေအတွက် ဘယ်လောက်နဲ့ MPTရဲ့ ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေကို လဲလှယ်ရယူနိုင်မှာပါလဲ။
လူကြီးမင်းရရှိထားသော MPT Point များကိုသုံးပြီး အောက်ဖော်ပြပါများမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ MPT ဝန်ဆောင်မှုများကို လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ – ၁၉၉ MPT Pointဖြင့် MPT ဖုန်းများသို့ 300MB အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့် (သို့မဟုတ်) MPT ဖုန်းများသို့ SMS အစောင် ၃,၀၀၀ ပေးပို့ခွင့် (သို့) ဖုန်းBill ၁၆၀ကျပ် တို့အနက်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ၏ သက်တမ်းမှာ လဲလှယ်ရယူပြီးချိန်မှစ၍ ရက်၃၀အထိဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် – Voice သည် MPT အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုရန် ဖြစ်သည်။
SMS သည် MPT အချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ရန် ဖြစ်သည်။
Balance သည် MPT အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုရန်နှင့် စာတိုပေးပို့ရန်၊ အင်တာနက်အသုံးပြုရန် တို့အတွက်ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါနှုန်းထားများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Service package အလိုက် ခံစားခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဇယား အတိုင်း ဖြစ်သည်။
IDD subscription fee ကို member level အားလုံး Points 499 Point ရှိရုံ ဖြင့် လဲလှယ် နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်
၂။ တစ်ရက်အတွင်းမှာ ဝန်ဆောင်မှုတွေ အများကြီး လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါသလား။
၃။ MPT Point ကိုသုံးပြီး MPT ဝန်ဆောင်မှု Package ဖြစ်တဲ့ Voice(သို့) Balance Package ကို လဲလှယ်ရယူထားပါတယ်။ MPT မဟုတ်တဲ့ တခြား Operator နံပါတ်ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။
(က) လူကြီးမင်းလက်ရှိအသုံးပြုနေသော အစီအစဉ် (Base Tariff(သို့)ဆွေသဟာ(သို့) ရှယ်ပြော၊ (သို့)ရွှေစကား) နှုန်းထားအတိုင်း ကျသင့်စေမည်ဖြစ်သည်။
(ခ) MPT Point များနှင့် လဲလှယ်ရယူထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၄။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ USSD Code ကို ရိုက်နှိပ်ပြီး MPT Point ကို MPT ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ လဲလှယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လဲလှယ်လို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
၁။ MPT Club member program ဆိုတာ ဘာလဲ။
၂။ မိမိ ရောက်ရှိနေသော အခြေအနေ ရှိ ခံစားခွင့် ကိုမည်မျှ ကြာခံစား နိုင်သနည်း။
၃။ နောက် member Level တက်ရန် မည်မျှ စောင့်ရမည်နည်း။
သက်မှတ် ထား သော Member Level တခု ခြင်းစီ၏ ငွေပမာဏ ပေါ် ပြည့်မှီ ခဲ့ပါက နောက် လတွင် member level တိုးမြင့်ပြောင်းလဲ သွားမည် ဖြစ်သည်။
၄။ လက်ရှိ Member Level ၏ အသုံးစရိတ် ကို ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ခြင်း မရှိပါက ခံစားခွင့်များ မည်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်နည်း။
၅။ Crown, Diamond, Platinum, Gold, Sliver ဆိုတာ ဘာလဲ။
Crown, Diamond, Platinum, Gold, Sliver ဆိုတာ အဖွဲ့ ဝင်များ မိမိရောက်ရှိနေသော အခြေအနေများကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိရောက်ရှိနေသော အခြေအနေအလိုက် အခွင့်အရေးများကိုခံစားနိုင်သည်။
၆။ အဖွဲ့ ဝင် ၏ သက်တမ်းကာလမှာ မည်မျှနည်း။
၇။ Membership level များကို မည်သို့ ပိုင်းခြား ထားသနည်း။
Member level ပိုင်းခြားမှုများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယား အတိုင်း သိရှိနိုင် ပါသည်။
Member level ပိုင်းခြားမှုများကို အသုံးပြု သူ၏ ၃လ ပျမ်းမျှ အသုံးစရိတ် နှင့် MPT sim card အသုံးပြုမှု သက်တမ်း ပေါ်မူတည်၍ level များကို သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။ လိုတရ သတင်းများကို ဖတ်ရှုနိုင်သည့် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းကို မည်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
လိုတရ သတင်းများကို ဖတ်ရှုနိုင်သည့် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းကို Android ဖုန်းတွင်သာမက iPhone များဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Android Version 5.0 နှင့်အထက် iOS Version 9.0 နှင့်အထက် ဖုန်းများသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။)
၂။ MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းတွင် လိုတရ သတင်းများကို Wifi သို့မဟုတ် တခြားကွန်ယက်များအသုံးပြု၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသလား။
MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းတွင် လိုတရ သတင်းများကို Wifi သို့မဟုတ် တခြားမည်သည့်ကွန်ယက်များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း လိုတရ ၏ အထူးခံစားခွင့်များကို MPT မိုဘိုင်းကွန်ယက်ဖြင့်သာလျှင်ရယူနိုင်မည်။
၃။ လိုတရ သတင်းများကို ဖတ်ရှုနိုင်သည့် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုမှုအတွက် ကျသင့်ငွေပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
လိုတရ သတင်းများကို ဖတ်ရှုနိုင်သည့် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းကို MPT မိုဘိုင်းကွန်ယက်ဖြင့် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄။ လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ပါသလဲ။
၅။ လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ဘယ်လိုဂိမ်းအမျိုးအစားများ ရနိုင်သနည်း။
1. LTE+ ဆိုတာဘာပါလဲ။
2. MPT ၏ LTE+ က ဘာတွေအားသာချက်ရှိပါသလဲ။
3.LTE+(4G) ကိုဖွင့်ထားပြီး LTE+အသုံးပြု၍မရသောနေရာများသို့သွားလျှင် ဒေတာအသုံးပြုရန်အတွက် 3G ပြန်ဖွင့်ရန်လိုပါသလား။
မလိုအပ်ပါ။ LTE+ network coverage မရှိသော နေရာများသို့ရောက်လျှင် အလိုအ လျောက် 3G Network သို့ချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ LTE+ သုံးနိုင်သော နေရာများသို့ ပြန်ရောက်လျှင် အလိုအလျာက် LTE+ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
LTE+ အသုံးပြုရန် ရှယ်ပြော (သို့မဟုတ်) ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကိုရယူထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
သင်၏ လက်ကိုင်ဖုန်းမှာ LTE(4G) အသုံးပြု၍ရသည့်ဖုန်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး လှိုင်းနှုန်းစဉ် ၁၈၀၀ MHz အသုံးပြု၍ ရသော ဖုန်းဖြစ်ရပါမည်။
သင်၏ SIM card သည်လည်း USIM ဖြစ်ရန်လိုပါသည်။ သင်၏ SIM card USIM ဖြစ်မဖြစ်ကိုသိရှိရန် *106*5# သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
5. Base-tariff အသုံးပြုသူများ LTE+ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Base-tariff အသုံးပြုသူများသည် LTE+ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ မရပါ။ base-tariff ၏ ဒေတာအား 256kbps (4ks/min) 128kbps (2ks/min) ဟု အမြန်နှုန်းအား ကန့်သတ် သတ်မှတ်ထားသည်ဖြစ်၍ LTE+ ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြု၍မရနိုင်ပါ။ MPT ၏ မြန်နှုန်းမြင့် LTE+ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရှယ်ပြော (dial*234*3#) သို့ ဆွေသဟာ (dial *234*2#) အစီအစဉ်ကိုရယူရမှာဖြစ်ပါသည်
6. ယခုအသုံးပြုနေသော SIM က USIM ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
*106*5# သို့ လွယ်ကူစွာ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး သင့် SIM card USIM ဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်ပါပြီ။ အကယ်၍ မဟုတ်ခဲ့လျှင် နီးစပ်ရာ MPT branded ဆိုင်များသို့သွား၍ USIM ဖြင့်အခမဲ့လဲလှယ်နိုင်ပြီး သင်၏နံပါတ်လည်းပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုင်နေရာများကို ဤလင့်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (http://bit.ly/2juQZ3O).
7. LTE+ အားမိမိဟန်းဆက်တွင် ဘယ်လိုဖွင့်ပြီးသုံးရပါ့မလဲ။
Settings သို့သွားပါ။ cellular ကိုရွေးပါ။ ပြီးလျှင် cellular data options သို့သွား၍ “voice & data” ကိုရွေးပြီး LTE (4G), 3G, 2G ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
Settings သို့သွားပါ။ mobile network ကိုရွေးပါ။ ပြီးလျှင် network mode သို့သွား၍ LTE/3G/2G ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
[For Huawei: ]
Settings သို့သွားပါ။ ပြီးလျှင် more သို့သွားပါ။ ထိုနေရာတွင် 4G ကိုရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။
[For Vivo: ]
Settings သို့သွားပါ။ Mobile Network ကိုရွေးပါ။ ပြီးလျှင် Network mode သို့သွား၍ 4G/3G/2G ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါမည်။
[For other handsets: ]
Settings သို့သွားပါ။ tethering & networks သို့ဝင်ပါ။ ထို့နောက် mobile network သို့သွားပါ။ ပြီးလျှင် Network mode သို့သွား၍ 4G/3G/2G ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါမည်။
How can I check my handset is 4G/LTE compatible?
8. မိမိ ၏ဟန်းဆက်သည် LTE+ အသုံးပြု၍ရ မရ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
settings သို့သွားပြီး Cellular Data Options သို့မဟုတ် Mobile network ၏အောက် တွင် 4G/LTE ဟုပါရှိပါက LTE(4G) အသုံးပြု၍ရသော ဟန်းဆက်ဖြစ်ပါသည်။
1. MPT Pay ဆိုတာဘာလဲ။
MPT Pay ဆိုသည်မှာ မြန်မာပြည်အတွင်း အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ငွေလွှဲပို့နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ အကောင့်အတွင်း ငွေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေလက်ခံခြင်းများကို MPT Pay အကောင့်မှတဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
2. MPT Pay ကိုဘယ်သူတွေအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်ခဘယ်လောက်ပေးရပါ့မလဲ။
3. MPT Pay အကောင့်ထားရှိခြင်းရဲ့အားသာချက်တွေက ဘာလဲ။
MPT Pay အကောင့်ဖြင့် အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ – MPT Pay အကောင့်အချင်းချင်းငွေလွှဲခြင်း (P2P) – ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း (မိမိဖုန်း/ အခြားဖုန်း) – ဈေးဝယ်ခြင်းများ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ငွေပေးချေခြင်း – ဘီလ်ကျသင့်ငွေများ ပေးချေနိုင်ခြင်း – ATM စက်မှ ငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း – ငွေသွင်း/ ငွေထုတ် လုပ်နိုင်ခြင်း
4။ MPT Pay အကောင့်ကို ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမလဲ။
“ MPT Pay အက်ပလီကေးရှင်းမှ
Step 4: အကောင့်ဖွင့်ပြီးကြောင်း အတည်ပြုသည့် စာတို (SMS) ရရှိပါက MPT Pay ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Step 7: အကောင့်ဖွင့်ပြီးကြောင်း အတည်ပြုသည့် စာတို (SMS) ရရှိပါက MPT Pay ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။”
6 . IMPT Mobile Pay ဖွင့်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ MPT Mobile Pay အကောင့်ကို ဖွင့်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြောင်းလဲချင်ပါက Customer Care 999 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပါ။ နံပါတ်ပြောင်းလဲမှု အတည်ပြုပြီးစီးပြီးနောက်တွင် SIM ကဒ်အသစ် သို့ အကောင့်ထဲတွင်ရှိသော ငွေများကို လွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
7. MPT Mobile Pay အကောင့်က မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါသလဲ။
8. MPT Mobile Pay ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လုပ်ကိုင်လိုပါက မည်သူ့ထံဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါသလဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ Customer Care 999 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကြောင်းကို ပြောပြပါ။ သို့မဟုတ် MPT Mobile Pay Customer Care Teamရဲ့ Email ဖြစ်တဲ့ [email protected] သို့ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအသေးစိတ်အကြောင်း ကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ MPT Pay Sales & Distribution ဌာနက သင့်ထံ သို့ ပြန်လည် ဆက်သွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
9. MPT Pay အကောင့်မရှိတော့လျှင် MPT Pay ကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
သင့်၏ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဖြင့် MPT Pay ကိုယ်စားလှယ်နေရာများတွင် ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
10. MPT Pay ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတာဘာလဲ။
“ MPT Pay ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာ MPT Pay ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြပေးနိုင်သူ ဖြစ်ပြီး အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်သည်။ – သင်၏ MPT Pay အကောင့်မှ ငွေသွင်းခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်း၊ – ဘောက်ချာဖြင့် ငွေထုတ်ခြင်း၊ – ကိုယ်စားလှယ်မှ တဆင့် ငွေလွှဲခြင်း – သုံစွဲသူအကောင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း”
11. MPT Pay ကုန်သည် ဆိုတာဘာလဲ။
MPT Pay ကုန်သည် ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းများအတွက် MPT Pay ဖြင့် အီလက်ထရောနစ် ပိုက်ဆံကို လက်ခံပေးနိုင်သူ ဖြစ်သည်။
• Android မှ တစ်ဆင့် အသုံးပြုလိုပါက Google Play Store တွင် “ MPT IPTV” ဟုရိုက်နှိက်ရှာဖွေကာ ရယူနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iptv.mpt.mm ဒီမှာ တစ်ဆင့် ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။
• iOS application မှတစ်ဆင့် ဒေါင်းလုဒ်ရယူလိုပါက iOS app store တွင် “ MPT IPTV” ဟုရိုက်နှိက် ရှာဖွေကာ ရယူနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) ဒီမှ https://apps.apple.com/us/app/mpt-iptv/id1530893772 တစ်ဆင့် ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။
• မိုဘိုင်း web မှတစ်ဆင့် အသုံးပြုလိုပါက ဒီမှာ https://iptv.mpt.com.mm/ နှိပ်ပါ။
• လိုတရ Portal မှတစ်ဆင့်ရယူလိုပါက http://lotaya.mpt.com.mm/event/260 (သို့မဟုတ်) *7373# ကို ခေါ်ဆိုပြီး application ကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရုပ်သံလိုင်းများနှင့် ရုပ်ရှင်များကို App ကိုအသုံးပြု၍ ကြည့်ရှုရန် မဖြစ်မနေ subscribe လုပ်ရန် မလိုပါ။ MPT ဖုန်းအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး non-subscriber အဖြစ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(အချို့လုပ်ဆောင်မှုများကိုတော့ ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ဥပမာ။ ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းသည် subscription ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် (subscription ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုလို့ရအောင် လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်) ၊ အခြား အင်တာနက်လိုင်းများဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်း နှင့် EPL ဝန်ဆောင်မှုကို MPT မိုဘိုင်းဒေတာဖြင့်သာ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။)
၁) SMS မှတစ်ဆင့် MPT IPTV ဝန်ဆောင်မှုအားရယူလိုပါက 7373 ကို ON ဟု SMS (စာတို) ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
(င) 7373 shortcode မှ OTP code တစ်ခုလက်ခံရရှိပြီး စာရင်းပေးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ထို OTP ကိုဖြည့်ပါ။
(စ) OTP မှန်လျှင် 7373 မှ“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟူသောစာကိုသင်လက်ခံရရှိပြီး MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှုကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁၀။ MPT IPTV ၏ Subscription ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုလိုပါက မည်သို့သော ငွေပေးချေမှုများရှိသလဲ။
(အခြားဖုန်းအင်တာနက် (သို့) WIFI ဖြင့် အသုံးပြုလိုသူများအတွက်သာ)
MPT IPTV ၀န်ဆောင်မှုရယူထားခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် App နှင့် Web များတွင် “ပရိုဖိုင်” အောက်တွင်ရှိသော “ရယူထားသောအစီအစဥ်များကို စီမံသည်။” အောက်တွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) 7373 သို့ OFF ဟု SMS (စာတို) ပေးပို့၍လည်း ၀န်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။ (အခြားဖုန်းအင်တာနက် (သို့) WIFI ဖြင့် အသုံးပြုလိုသူများအတွက်သာ)
၁၁။ MPT IPTV ၏ Subscription ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသလဲ။
ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုတာ မြန်နှုန်းမြင့် အကန့်သတ်မဲ့ အိမ်သုံးအင်တာနက် ကို သင့်တင်မျှတသော ဈေးနှုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
ADSL ဆိုတာ တယ်လီဖုန်းလိုင်းစနစ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုက်ဘာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကတော့ တယ်လီဖုန်းလိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရတဲ့ ADSL အင်တာနက်စနစ်ထက် ပိုပြီးတည်ငြိမ်ပြီး မြန်ဆန်ပါတယ်။
ဖိုက်ဘာအင်တာနက်စနစ်ဟာ အကျိုးကျေးဇူးများပါတယ်။ (ဥပမာအားဖြင့် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာတောင် ဖိုက်ဘာအင်တာနက်စနစ်က လိုင်းကျသွားခြင်းမျိုးမရှိပဲ တည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။)
၃။ ဒုံးပျံအိမ်သုံး ဖိုင်ဘာအင်တာနက် အမြန်နှုန်း နဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက ဘယ်လောက်လဲ။
မိုဘိုင်းလ် နံပါတ် ၁ ခုစီ သို့ ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်များ
(လစဉ် မိုဘိုင်းလ် ၅ လုံးထိ ခံစားခွင့် )
၄။ အင်တာနက်သုံးစွဲတဲ့အခါ ဒေတာ ကန့်သတ်မှုတွေရှိပါသလား။
၅။ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ 15Mbps,25Mbps,50Mbps နဲ့ 100Mbps ဒေတာအမြန်နှုန်းကို အမြဲတမ်းရရှိနိုင်မလား။
ယခုအင်တာနက်စနစ်မှာ 15Mbps၊ 25Mbps၊ 50Mbps နဲ့ 100Mbps ဒေတာအမြန်နှုန်းအထိ အများဆုံးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒီအမြန်နှုန်းတွေဟာ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူ အများအပြား တစ်ချိန်တည်းအသုံးပြုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ အင်တာနက်အမြန်နှုန်း ဟာ မူလက အများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့အမြန်နှုန်းထက် အနည်းငယ်နှေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသုံးပြုသူ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းအတွက် လုံလောက်တဲ့အမြန်နှုန်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
၆။ ဒုံးပျံအိမ်သုံး ဖိုင်ဘာအင်တာနက် ကို ဘယ်လိုလျှောက်ထားနိင် မည်နည်း။
ဒုံးပျံအိမ်သုံး ဖိုင်ဘာအင်တာနက် ကို MPT Website၊ နီးစပ်ရာ MPT ဆိုင်များ၊ အရောင်းဝန်ထမ်းများ၊ MPT4U Application ရဲ့ အလိုလျှောက် စာြပန်စနစ်မှသော်လည်းကောင်း (သို့) 2800 / 018652800 သို့ ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
၇။ ငွေကောက်ခံမှုအပိုင်းမှာ ဘာသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသလဲ။ သုံးစွဲသူများဘက်မှ ငွေပေးချေမှုကို ဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်မှာလဲ။•
သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ လစဉ်ကြေးငွေကို လမစမှီကြိုတင်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ MPT မှ FTTH လစဉ်ကြေးဘေလ် များကို MPT TRAကောင်တာများ ၊ MPT Pay application, MPT ငွေဖြည့်ကဒ် မှတဆင့် ပေးချေခြင်း ၊ CB BANK၊ KBZ BANK, AYA BANK နှင့် MPT မှသတ်မှတ်ထားသော တယ်လီဖုန်းဌာန များတွင်သာမက MEB နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော CITY MART၊ JUNCTION၊ OCEAN၊ SUPERONE၊ MYANMA APEX BANK ၊ UNITED LIVING MALL စသည့် ဈေးဝယ်စင်တာများမှတဆင့်လည်း လွယ်ကူစွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
၈။ ဘေလ်များကို ဘယ်လိုစစ်လို့ ရနိုင်သလဲ။
(၁) ဘေလ်များကို 2800 / 018652800 သို့ခေါ်ဆိုပြီး သင့်၏ အကောင့်ကုတ် တစ်ခါသုံး စကားဝှက်အား အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည် ။
(၂) သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ လစဉ်ကျသင့်သော ဘေလ်များကို MPT4U Application ရဲ့ အလိုလျောက် စာြပန်စနစ်မှ အကောင့်ကုတ် တစ်ခါသုံး စကားဝှက်အား အသုံးပြု၍လည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည် ။
၉။ မြန်နှုန်းများ တိုးမြှင့်ခြင်း လျှော့ချခြင်းများ ပြုလုပ်လို့ရနိုင်ပါသလား ပါသလား။
အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ သုံးစွဲတဲ့ အမြန်နှုန်းကို အချိန်မရွေး အတိုးအလျှော့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသုံးပြုသူအနေနဲ့ ဒေတာအမြန်နှုန်းလျှော့ချတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ ဝန်ဆောင်ခ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ကို တစ်ကြိမ်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု အမြန်နှုန်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်လိုပါက ပြုလုပ်လိုသည့်လ၏ ပထမပတ်မတိုင်မီ ၅ ရက်ကြို၍ လာလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ယာယီလိုင်း ပိတ်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ အင်တာနက်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ဝန်ဆောင်ခ ၁၀,၀၀၀ ကျပ် တစ်ကြိမ်ပေးသွင်းပြီး အများဆုံး သုံးလအထိ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းကို ခေတ္တရပ်နားထားနိုင်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ပြုလုပ်လိုသည့်လမတိုင်မီ ၅ ရက်ကြို၍ MPT TRAကောင်တာများ တွင် လာရောက် လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ အင်တာနက်နှေးကွေးခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်ခြင်းတို့ကို တွေ့ကြုံရသည့်အခါတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
MPT ၏ အိမ်သုံးအင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု FTTH အခက်ခဲများ ဖြေရှင်းခြင်း လမ်းညွှန်ကိုအောက်ပါအတိုင်းဝင်ရောက်ကြည်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၂။ Username နဲ့ Password ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။ (Huawei ONU)
အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင်ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်အား အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
၁၃။ Username နဲ့ Password ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။ (ZTE ONU)